राेकिएनन् सीताका अाँखामा अाँसु, विह्वल प्रचण्डले सम्झाइरहे (भिडियाे) - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
राेकिएनन् सीताका अाँखामा अाँसु, विह्वल प्रचण्डले सम्झाइरहे (भिडियाे)
कृष्ण आचार्य काठमाडौँ मंसिर ३
स्व प्रकाशको स्मृति कार्यक्रममा प्रचण्ड र सीता
‘सबैको उपस्थितिले परिवारमा नयाँ ऊर्जा थपेको महसुस भएको छ। म परिवार र आफ्नो व्यक्तिगत गर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईंहरुको यो प्रेरणा हुँदैनथ्यो भने सायद...।’
छोरा प्रकाश दाहालको प्रथम स्मृति सभाको अवसरमा सोमबार विहान खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा केही बोल्दै गर्दा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीचमै रोकिए।
उनको आँखा रसायो। लामो सास ताने। अनि फेरि बोले, ‘हाम्रो परिवार सायद विघटन भइसक्थ्यो होला।’ प्रचण्डले यति भनिरहँदा सभामा उपस्थित धेरैले आँखाको आँसु पुछिरहेका थिए ।
उता प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल पनि होसमा थिइनन्। छोरीहरु रेणु र गंगाले दुईतिरबाट समाएर मञ्चमा बसालेदेखि नै सीता भावविव्हल थिइन्। हजारौँको संख्यामा सभामा उपस्थितहरुले उनको पीडा सहजै महसुस गर्न सक्थे।
हुनपनि, कसको आमाको आँखा नरसाउला र एक्लो छोरा गुमाउँदा! कसको आमाको मन भारी नहोला र आफूले काखमा राखेर स्तनपान गराउँदै तातेताते गर्न सिकाएको छोराले उमेर छँदै संसार छाडेर जाँदा!
स्पष्टै देख्न सकिन्थ्यो, सीता पनि सोही पीडाबाट ग्रस्त थिइन्।
मस्तिष्कसम्बन्धी रोग प्रोगेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी (पीएसपी) बाट पीडित सीतालाई छेउमै बसेका पति प्रचण्डले बेलाबेला सम्झाइरहन्थे। तर, सीताले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनथिन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सभामा अलिका ढिला पुगेका थिए। मञ्चको अघिल्लो भागमा खाली ठाउँ थिएन। त्यसकारण मञ्चको पछिल्तिर रहेका छोरीहरु रेणु र गंगासँग रहने गरी लगियो। आमा साथमा आएपछि छोरीहरु रेणु, गंगा र बुहारी बिना सँगै भक्कानिन थाले।
स्वर्गीय प्रकाशकी दाेस्री पत्नी सिर्जना त्रिपाठी (दाहाल) ले पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिनन्। भावविव्हल उनी पनि मञ्चबाट ओर्लिइन्।
प्रकाशको प्रथम स्मृति दिवसका लागि खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा निकै ठूलो जनसमूहले सहभागिता जनाएको थियो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुदेखि राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेता तथा कार्यकर्ता र प्रकाश दाहाललाई माया गर्नेहरु उपस्थित थिए।
त्यहाँको माहोल हेर्दा लाग्थ्यो, जीवनमा थुप्रै आलोचना भोगेपनि प्रकाशले असंख्य शुभचिन्तकहरुपनि कमाएका रहेछन्।
१७ असार २०३८ सालमा चितवनमा जन्मिएका प्रकाश जनयुद्धको समयमा बाबु प्रचण्डसँगै युद्धमा होमिए। सानै उमेरदेखि प्रचण्डका सहयोगीको भूमिका निभाउँदै आएका प्रकाशले प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुँदा होस् या प्रधानमन्त्री हुँदा, स्वकीय सचिव बनेर आफूलाई कुशल व्यवस्थापकका रुपमा उभ्याए।
त्यसैले पनि होला, आजको स्मृति कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रकाशलाई सबैसामु उदयमान प्रतिभाका रुपमा परिचय गराए। ‘प्रकाश उदयमान प्रतिभाको रुपमा परिपक्क हुँदै गरेका थिए’ स्मृति सभामा भावुक हुँदै प्रचण्डले भने, ‘उनले धेरै कुरा गहन ढंगले बुझ्न थालेका थिए, तर, हाम्रो परिवार, देश र पार्टीले जुन अवस्थाको सामना गर्‍यो, त्यो दुःखद् छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रकाशको प्रशंसा गरे। प्रचण्डजस्तो व्यक्तिको स्वकीय सचिवको रुपमा रहेर आफ्नो भूमिका निभाउनु र उनको हरेक कामको व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा नभएको ओलीको ठहर थियो।
सो अवसरमा प्रकाशबारे स्मृति ग्रन्थसमेत विमोचन गरिएको थियो। ग्रन्थमा प्रकाश दाहालको बाल्यवस्थादेखि उनको जीवनको अन्त्यसम्मका महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरु समावेश गरिएका छन्।
मञ्चमा आसिन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई ग्रन्थ हातमा लिएर एकछिन टोलाइरहेका देखिन्थे। सायद उनीहरुपनि प्रकाशप्रति प्रेम दर्शाइरहेका थिए।
आजभन्दा ठिक एक वर्ष पहिले ३ मंसिर ०७४ मा एकाबिहानै अनलाइनहरुमा एउटा समाचार बन्यो, प्रकाश दाहालको असामयिक निधन। यो समाचारका सबैका लागि स्तब्ध बनाउने खालको थियो।
प्रचण्ड परिवारका त झन् प्रकाशको असामयिक निधन निकै ठूलो पीडादायी घटना थियो।
तर, जसरी सत्यलाई जित्न सक्ने अर्को शक्ति हुँदैन, त्यसैगरी प्रचण्ड परिवारका लागि यो सत्यलाई स्वीकार्नुबाहेक अर्को बिकल्प थिएन।
प्रकाशले यो धर्ती छाडेको एक वर्ष बितिसकेको छ। तर, अझै पनि परिवार उनको यादमा डगमगाइरहेको छ। कहिँकतै उनकै अभाव महसुस गरिरहेका छन्।
त्यसैले, सोमबार विहानै प्रकाशकी दिदी गंगाले फेसबुकमा लेखिन्, ‘बाबु आज तिम्रो प्रथम बार्षिकी! तिमीबिनाको यो एक वर्ष हाम्रो लागि कहालिलाग्दो पलपल तिम्रो सम्झनामा बिते। तिमी बिनाको परिवार अधुरो छ भाइ, हार्दिक श्रद्धासुमन तिमीलाई!’
याे पनि: प्रकाशको स्मृतिसभामा यसरी भक्कानिइन् सीता (फोटोफिचर)
प्रकाशित ३ मंसिर २०७५, सोमबार | 2018-11-19 15:42:13